Tho Silica Roller, China bobumba Roller, Kamroller, tho Silica Imikhiqizo - Kamroller
Okunye Isikhunta bobumba futhi lowo Mkhiqizo
OTHER ISIKHUNTA SASIKHONA Ceramic nezinkinobho UMKHIQIZO
Ukwenza ngcono izingabunjalo futhi banciphise izindleko ngu kunciphise ekuqongeleleni sulfate, kungenzeka ukuba sifinyelele ngcono ikhwalithi ingilazi kanye ekunciphiseni Scrap ziqhathaniswa steel roller. I tho Silica roller ine conductivity eliphansi kakhulu ezishisayo kanye kuyisinqumo esingcono kakhulu yokulawula inqubo annealing, ukunika amandla ephansi ukusonteka ingilazi ngaphandle microcracks nokucindezeleka ongaphakeme noma ingilazi iribhoni. · Smooth ebusweni, kulula ukuba aphathe tin noma tin oxide I fu ...
Silicon steel annealing phansi roller
Asetshenziswa zokukhiqiza high Silicon steel ishidi Silicon steel annealing ezinamasondo afaneleka ngokufuna izinqubo annealing ezifana steel yokukhiqiza. Isetshenziselwa ukuba sithwale annealing ekusebenzeni lokushisa eliphezulu Silicon steel ishidi, futhi uhla lokushisa 600-950 ° C. Ithebula roller yakhelwe ukuhlangabezana nezidingo inqubo kanye isetshenziswa ngesikhathi esifanayo ne nokuphathelene lobunikazi kushaft ekupheleni ubuchwepheshe Kamroller sika, ukuqinisekisa ukulethwa bushelelezi futhi esivikelekile. Futhi r ebusweni ...
Tho Silica Roller izingxenye yezimoto anneal ...
Embonini yezimoto, Kamroller unikeza anhlobonhlobo izingxenye ukucacisa kanye nemikhiqizo. Ngenxa okusezingeni eliphezulu amandla mechanical wokushintsha kwamandla nokwakheka kwezinto kakhulu futhi izakhiwo kagesi zobumba, abakhiqizi yezimoto kanye izingxenye auto abakhiqizi ziya ziba mandla ekusebenziseni izinto Ceramic esikhundleni izinsimbi. Sisebenza namakhasimende ethu ukuthuthukisa okuthembekile, okuhlala kanye ongaphakeme izingxenye izindleko. Sisabalalisa ezinamasondo ngoba nginyathela amaziko nezingxenye zezimoto, esikhiqiza engasindi izingxenye yezimoto t ...
Tho Silica Plates
Izithuthi eguqa ukwakha isikhunta
KAMROLLER FLAT Arch IMIKHIQIZO
High Uhlanzekile tho Silica Raw Material
KAMROLLER® kuyinto nomkhiqizi omhlaba anothile ephezulu tech zobumba kusukela 1988. E-United States kanye ne-China, izimboni kanye izikhungo ukunikeza imikhiqizo eyikhwalithi kanye nezinsiza ukuze amakhasimende emhlabeni jikelele.
Shanghai Road, Xinyi Economic - kwetheknoloji Development Zone, Xuzhou Idolobha, Isifundazwe Jiangsu, China